उपत्यकाको निशेधाज्ञा जारी राख्ने कि खोल्ने टुंगो बुधबारै लाग्छः प्रजिअ दाहाल - Himal Dainik
उपत्यकाको निशेधाज्ञा जारी राख्ने कि खोल्ने टुंगो बुधबारै लाग्छः प्रजिअ दाहाल
१६ भाद्र २०७७, मंगलवार २३:१५
कोरोना भाइरसको महामारी समुदायमा फैलिएपछि सरकारले स्थानीय जिल्ला प्रशासनको माध्यमबाट देशका अधिकांश जिल्लामा जस्तै उपत्यकामा पनि दुई हप्तादेखि निशेधाज्ञा जारी छ।
एक हप्ताका लागि सुरुमा भदौ ३ गतेदेखि लागू गरिएको निशेधाज्ञा १० गतेपछि पनि लम्बिएर १७ गते बुधबार मध्यराती समाप्त हुँदै गर्दा आम जनतामा यो निशेधाज्ञाको निरन्तरता हुने वा नहुने विषयले राज्यमात्र होइन आम जनतामाझ पनि चासो र चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ।
यसै विषयमा आधिकारिक निर्णय लिने निकाय प्रमुख निकाय काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले हाल जारी रहेको निशेधाज्ञा मंगलबारपछि के हुन्छ भन्नेबारे गृहमन्त्रालयसँग मंगलबार अपरान्ह परामर्शपछि निर्णय लिने जानकारी दिए। प्रस्तुत छ, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख जनकराज दाहालसँग गरिएको कुराकानीको अंशः
प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, हाल उपत्यकामा जारी रहेको निशेधाज्ञा बुधबारपछि पनि लम्बिन्छ कि के हुन्छ?
हाल जारी निशेधाज्ञा बुधबार मध्यरातीसम्म कायम छ। यसको निरन्तरता वा अन्त्यबारे उपत्यकाका हामी तीनै जना प्रमुखले चरणबद्धरुपमा समाजका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरिरहेका छौँ। उहाँहरुसँगको छलफलका क्रममा हामीले मिश्रीत धारणा पाएका छौँ। नागरिक समाजका कतिपय प्रतिनिधिहरुले यसलाई अझ कडाइका साथ लागू गर्न सुझाव दिइरहनु भएको छ। अर्कोतर्फ कतिपयले लकडाउन र निशेधाज्ञाको बाबजूद पन िसंक्रमण बढिरहेपछि यो निशेधाज्ञा जारी राख्न जरुरी छैन भन्ने छन् भने कसैले यहि रुपमा निरन्तरता दिन पनि सुझाइरहेका छन्।
यसका बाबजूद पनि नागरिकको स्वास्थ्य र जीवन रक्षा गर्ने दायित्व राज्यकै हो। यसैले यति गम्भीर विषयमा हामीले भोलि गृह मन्त्रालयमा थप परामर्श गरेपछि निर्णय सार्वजनिक गर्छौँ।
चरणबद्ध परामर्श गर्यौँ भन्नु भयो, कोसँग परामर्श गर्नु भयो र उनीहरुको सुझाव के आयो?
हामीले उद्योग, व्यवसायीदेखि पर्यटन व्यवासयी, समाजका विभिन्न विज्ञहरुसँग पनि परामर्श गरेका छौँ। यसरी छलफल गर्दा उद्योग, व्यवसायीका आफ्नै चासो र चिन्ता छ भने पर्यटन व्यवसायी आफ्नै कुरा छन्। तर, उनीहरुका अतिरिक्त आम जनताको स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि हामीले जनस्वास्थ्यविदहरुको सल्लाह अनुसार उपयुक्त निर्णय गर्छौँ।
दुई हप्तादेखि निशेधाज्ञा लगाउँदा न त संक्रमितको संख्या घट्यो न त सर्वसाधारण जनताको जनजिवन नै सहज भयो भने यो निशेधाज्ञाको औचित्य के भयो त?
सामान्य रुपमा हेर्दा अहिले संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। त्यस मानेमा यहाँले भनेको कुरा ठिकै होला। तर, विज्ञहरुले कोरोना संक्रमणको कोर्ष १५ दिनको हुन्छ। अहिले यो १५ दिनको अवधिमा यो चेन रेटमा मानिसको आवतजावत पनि घटेको छ। यसरी घरमा बस्दा कि संक्रमित भए पनि आफैँ पचाएर पनि जान्छ कि संक्रमित विरामी हुन्छ। यसरी सबै मानिस आफैँ सजक भएर घरमा सामाजिक दुरी कायम गरेर बसेमा संक्रमणको बृद्धिदर घट्छ नै।
तर, आम जनताको दैनिक जीवन त अत्यन्त कष्टकर हुँदा रोग भन्दा भोकले सताउँदै छ भने यो निशेधाज्ञा कति उपयुक्त छ?
हो अवश्य नै अहिले सबै क्षेत्रका नागरिकको जनजीवन प्रभावित भएको छ। त्यसैले कतिपयले लकडाउन अथवा निशेधाज्ञा मात्रै समस्याको समाधान होइन पनि भनिरहनु भएको छ। कतिपयले अब कोरोनासँगै लिभिङ टुगेदर गरी जानु पर्छ पनि भनिरहेका छन्। यसका बाबजूद पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेको स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ। भनिन्छ, ८० प्रतिशत संक्रमणको नियन्त्रण व्यक्तिकै भूमिकामा निर्भर गर्छ। पाँच महिनादेखि जुन पहल हामीले गरिरहेका छौँ त्यसमा आम जनताले मास्क लगाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नेदेखि सामाजिक दुरी कायम गर्ने कुरामा इमान्दारीताका साथ गम्भीर हुन जरुरी छ।
गत चैतदेखि जेठसम्म र अहिले पनि दुई सातासम्म आम जनताले राज्यले जारी गरेको लकडाउन आदेश र निशेधाज्ञा पालनामा खासै उलंघन पनि गरेनन्। तर, राज्य प्रशासनबाट भएको कमजोरीका कारण मानिसहरुको आवतजावत भएको होइन र?
यो विषयमा निशेधाज्ञा पहिले लकडाउन खुकुलो बनाएपछि कमजोरी भएकै हो। त्यसले पनि केही समस्या निम्त्याएको कुरा सहि होला। तर, अहिले हामीले उपत्यकाका सबै नाकामा सुरक्षाकर्मी राखेर मानिसहरुको आवतजावतमा नियन्त्रण गरेका छौँ। पहिले जुन त्रुटिको कारण संक्रमण फैलियो भनिन्छ त्यो त्रुटि अहिले नहोस् भन्ने तर्फ हामी सजक छौँ। तर, फेरि पनि भन्छु, संक्रमणको फैलावट रोक्ने जिम्मेवारी ८० प्रतिशतसम्म त व्यक्तिमै निर्भर गर्छ।
अब पनि लकडाउन वा निशेधाज्ञाकै निरन्तरतामा जाने कि आगामी दिनमा के गर्ने भन्नेबारे कुनै रणनीति बनाउनु भएको छ?
यसबारे हामीले परामर्श गरिरहेकै छौँ।
यसरी अनन्त समयसम्म लकडाउन गरेर जान पनि सम्भव छैन। सबै खुला गर्न पनि संक्रमणको खतरा बाँकि नै छ। यस्तो अवस्थामा अब विषयगत निकायको प्रोटकल बनाएर त्यसको आधारमा सम्बन्धित निकायलाई नै अनुगमनको जिम्मा दिएर अघि बढ्न आवश्यक छ। अर्थात कुनै कलकारखाना वा उद्योग खुलाउने हो भने त्यो कारखानामा तोकिएको प्रोटकल पालना गर्ने गराउने दायित्व उक्त कारखानाकै प्रमुखको हो। त्यसको अनुगमन, नियमन गर्ने जिम्मा उद्योग विभागको होला। कृषि क्षेत्रको कृषि मन्त्रालय मातहत, अथवा बाणिज्यको निकायमा उही निकायको प्रमुखलाई प्रोटकल लागूदेर्खि अनुगमन गर्न जिम्मा दिएर त्यो कार्यान्वयन नभए सम्बन्धित निकायकै प्रमुखलाई कारबाही गर्ने पद्धती अपनाउन जरुरी छ।
यसका अतिरिक्त कोरोना संक्रमणबाट बच्ने र बचाउँने सवालमा पहिलो दायित्व नागरिक स्वयं कै हो। आम नागरिक जति जिम्मेवार, सजक र गम्भीर हुन्छन् त्यति नै सबै सुरक्षित हुन र सहज वातावरणमा बाँच्न सम्भव हुन्छ।
अघिल्लोपाउने भए क्रिकेट खेलाडीले पारिश्रमिक
पछिल्लोकोरोनाबाट भैरहवामा एक महिलाको मृत्यु